I-Agent / OEM / ODM - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Imichilo Eguqukayo Eguqukayo
Imichilo Yesoft Neon
Ukukhipha uhlangothi olulodwa
Ukukhipha uhlangothi olubili
Ukukhipha okungu-360 Degree
Amapheshana angenantambo we-1st Generation
Amapheshana angenantambo wesizukulwane sesibili
Ingxenye #: DC12V / 24V
I-Flexible Led Strips (IP20)
Imichilo Yesoft Neon (IP65)
I-Agent / OEM / ODM
Umenzeli / i-OEM / i-ODM
Siqhubeka nokusungula ngokuya ngezidingo zamakhasimende, sisungule isikhundla esiphambili ocwaningweni, kwezentuthuko, kwezobunjiniyela, nasekumaketheni kwesisombululo sokukhanyisa esise-LED. Thembela kuzinzuzo eziphelele zocwaningo lwe-LED Lighting, ukuthuthuka, ubunjiniyela nokumaketha, u-Abestis uba yiphayona elihlakaniphile le-LED Lighting. Njengamanje, imikhiqizo yethu nezixazululo sezivele zisetshenzisiwe emazweni amaningi nakubantu abayizigidi emhlabeni jikelele.
Isahluko Sokuqala: Umenzeli Womkhiqizo Wethu
Siqhubeka nokusungula ngokuya ngezidingo zamakhasimende, sisungule indawo ehamba phambili embonini emikhakheni emine emikhulu: izinsizakalo eziyisisekelo zokuphepha, izingxenye nezinhlelo, insizakalo yobuchwepheshe kanye netheminali
Isahluko Sesibili: Isevisi ye-ODM
Kwesinye isikhathi kufanele ucabange ngaphandle kwebhokisi, njengoba kufakazelwa yizicelo eziningi esizifezile ngezixazululo ezintsha ezihlukile zokukhanyisa. I-Joineonlux Strip light inguMkhiqizi Wezinto Zangempela, siyakwazi futhi sibheke phambili ukubambisana neyakho.
Ukusika i-Edge LED Technology
Amaklayenti ethu e-OE / OES anethimba lonjiniyela abanamakhono. Umnyango wethu we-R & D osesizeni ufuna futhi uhlole intuthuko yakamuva kubuchwepheshe be-LED bephrojekthi yakho.
Isahluko Sesibili: Isevisi ye-OEM
Umkhiqizi Ukuvumelana Nezimo
Asikho isisombululo se-LED esilingana nosayizi owodwa. Sinamakhono okuvumelanisa izinqubo zethu nokwenza ngezifiso noma imiphi imikhiqizo yethu - noma ukukuakhela entsha - ekucacisweni kwakho ngqo.
Ukunikezwa Kokuthenga Okunamandla
Ukuthengiswa kwethu kungumgogodla webhizinisi lethu le-OEM. Ngokuhlanganisa imisebenzi ngaphansi kophahla olulodwa, ifektri yokukhanya kwe-strip yaseJoineonlux inikeza ukucaca okungenakuqhathaniswa, ikhwalithi, nokubaluleka kumakhasimende ethu e-OE ne-OES.
U-Abest Lighting Spirit "gcina isithembiso futhi uzame konke okusemandleni ethu"! Isiko le-Abest eligxile enhliziyweni yabasebenzi bakwa-Abest, futhi linikeza okunamandla kokuthuthuka okusimeme kwe-Abest.